Man City oo iska xaadirisay wareega Siddeeda ee tartanka FA Cup kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Swansea City… +SAWIRRO – Gool FM
Man City oo iska xaadirisay wareega Siddeeda ee tartanka FA Cup kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Swansea City… +SAWIRRO
Dajiye February 10, 2021
(England) 10 Feb 2021. Manchester City ayaa u gudubtay wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka FA Cup kaddib markii ay 1-3 kaga adkaatay kooxda Swansea City oo ay ku booqatay garoonka Liberty Stadium, kulankii wareega shanaad ee tartanka FA Cup-ka.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Daqiiqadii 30-aad kooxda Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Kyle Walker, kaddib markii uu caawinta goolkan uu ka helay Rodri.
47 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay Raheem Sterling oo caawin ka helay saaxibkiis Rodri ayaa ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineyay kooxda Manchester City.
Daqiiqadii 50-aad Gabriel Jesus ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxda Manchester City, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 0-3, kaddib markii ay caawinta goolan ay kaga timid Bernardo Silva.
77 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd kooxda Swansea City ayaa la timid gool, waxaana 1-3 ka dhigay xiddigooda Morgan Whittaker, kaddib markii uu caawin ka helay Ryan Manning.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-3 ay kaga adkaatay Manchester City kooxda Swansea City oo ay ku booqatay garoonka Liberty Stadium, kulankii wareega shanaad ee tartanka FA Cup-ka, Sky Blue ayaana u gudubtay wareega xiga tartankan ee siddeed dhamaadka.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Sevilla iyo Barcelona ee Copa del Rey oo la shaaciyey
Sevilla oo garoonkeeda Ramon Sanchez guul kaga gaartay Barcelona kulanka lugta hore wareega Afarta ee Copa del Rey… +SAWIRRO